Momba anay - Shanghai Wanhoo Carbon Fiber Industry Co., Ltd.
Orinasa nanomboka ny niorenany, manaraka hatrany ny talenta ho an'ity, ny fitsipiky ny fahatsoram-po, dia manangona ny sangany indostrialy, ny haitao fampahalalana mandroso any ivelany, ny fomba fitantanana sy ny traikefa momba ny asa ary ny zava-misy amin'ny orinasa an-trano, ho an'ireo orinasa hamatsy isan-karazany vahaolana, fanampiana orinasa hanatsarana ny haavon'ny fitantanana sy ny fahaizan'ny famokarana, hahatonga ny orinasa amin'ny fifaninanana tsena masiaka hifikitra amin'ny fifaninanana, hahazoana fampandrosoana haingana sy maharitra ny orinasa. Hamafiso ny orinasa manomboka amin'ny mpitarika ka hatrany amin'ny kalitaon'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahavelomana; Ny orinasa dia manome lanja lehibe ny fitantanana, ny fahombiazana, ny fandanjana ny toekarena mba hahazoana tombony, mba hifehezana henjana ny orinasa, andraikitra mazava, hanatsara ny fahombiazan'ny asa, ny fampidirana ny rafitra fitantanana mandroso ankehitriny, ny fanatsarana ny lalàna sy ny fitsipika, ny andraikitry ny orinasa ho an'ny mpiasa tsirairay, ny famahana olana dia azo vahana haingana, ny lozam-pifamoivoizana dia esorina ao anaty tsimoka; Ny talenta no lakilen'ny fampandrosoana ny orinasa. Mba hitadiavana fampandrosoana maharitra, ny orinasa dia nanangana sy nanatsara ny faritry ny talenta, miezaka mba hahatonga ny mpiasa rehetra hilalao feno ny talenta sy ny talentany, mba hahafahan'izy ireo milalao feno ny heriny ary mahafoy tena amin'ny adidiny.
Shanghai Wanhoo Carbon Fiber Industry Company dia natokana ho an'ny R&D, famokarana, varotra ary varotra fitaovana vaovao mifangaro mandroso eo amin'ny tsena manerantany. Manam-pahaizana manokana amin'ny fitaovana fibre karbaona izahay ary manarona ny kojakoja fanatanjahan-tena, ny fiainam-pianakaviana, ny angovo hidrogen ary ny fampiharana indostrialy ny vokatra isan-karazany.
Ny fibre karbaona azontsika dia azo ampiasaina amin'ny sela solika hidrogen, ao anaty fiara, faritra misy fiara, semikonduktor elektronika, fanontana 3D, fanamboarana ary fitaovana fitsaboana.
Ny tanjonay dia ny hampiasa fitaovana teknolojia vaovao hanompoana ny filan'ny olona miavaka, hitahiry talenta ary hampivelatra ny lalam-barotra hiomanana amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny ho avy.
Hiezaka ny tsara indrindra izahay hanampy anao, mifandraisa aminay fotsiny raha misy fanontaniana na zavatra mahaliana anao.